လင်္ကာ: နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာပေးဆပ်ဖို့.ရယူဘို့မဟုတ်( မောင်မောင်ဝမ်း)
ရန်ကုန်ရောက်လို့…သိပ်မကြာဘူး….ပြသနာကစတက်တော့တယ်…ဘယ်နေရာမှတည်းလို့မရဘူး..ကျနော်တည်းခိုရာအိမ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီး….ထောက်လှမ်းရေးများက…ဒုက္ခလိုက်ပေးတယ်…ဘယ်လိုလုပ်သလည်းဆိုတော့….ညဘက်သန်းခေါင်ကျော်လောက်…ရဲတွေ…ရ၀တတွေနဲ့ဧည့်စာရင်းအမြဲလာစစ်တယ်….ဖမ်းတာ လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး…အဲဒီ့အိမ်ကမခွာမခြင်းညတိုင်းဧည့်စာရင်းလာစစ်တာ….ကြာတော့…အိမ်ရှင်တွေက ကြောက်လာတယ်…..အလိုက်သိသိပဲ…ခွာပေးပါတယ်…တည်းခိုအိမ်တလုံးပြီးတလုံးပြောင်းလာလိုက်တာ… နောက်ဆုံးတည်းစရာနေစရာမရှိတော့လို့…တည်းခိုခမ်းမှာသွားတည်းတယ်…..နှစ်ရက်ပဲတည်းရသေးတယ်… တည်းခိုခမ်းကမန်နေဂျာက…ဆက်တည်းခိုခွင့်မပေးတော့လို့…တော်တော်ကိုရွာလည်တာ….ဒါနဲ့အဲဒီ့အကြောင်း…ကျနော်က..ယခုထောင်ထဲရောက်နေတဲ့…၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်..ကိုကိုကြီးဆီလှမ်းအကြောင်းကြားတော့…ကိုကိုကြီးက….သတင်းတပ်ဖွဲ့ကအရာရှိတချို့နဲ့အချေအတင်ဖြစ်ပါလေရော…နောက်တော့…ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူး…ကျနော်က…ဟန်းဘက်အိတ်ဆွဲတည်းခိုခမ်းကဆင်းမယ်အလုပ်ရောက်မှ…တည်းခိုခန်း..မန်နေဂျာက…ဆက်တည်းလို့ရပါပြီ..အကို..ကျနော်တို့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့…နားလည်ပေးပါဗျာဆိုအခါခါတောင်းပန်ရှာတယ်…..။ကျနော်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးသားမို့…ဘယ်သူကိုမှအပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး……ဒီလိုနဲ့ဖြစ်ချင်တော့…နောက်နေ့လည်းရောက်ရော….ဗြုန်းဆို…အရင်ထောင်ထဲနဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာတုန်းကရထားတဲ့…ဒဏ်ရာ(အာရုံကြောညှပ်တဲ့ရောဂါ)ကပြန်ထလာပြီး…လုံးဝလမ်းလျှောက်လို့မရ…ထလို့လည်းမရဖြစ်တယ်လေ…နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ရဲဘော်တွေရောက်လာပြီး…ဘားလမ်းကကုသိုလ်ဖြစ်မွတ်စလင်..ဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်……အဲဒီ့ဆေးရုံမှာက…ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိသားစုဆရာဝန်ကြီး)ရှိတယ်…..သူကနိုင်ငံရေးလောကသားများဆို…လာသမျှအကုန်ဆေးဒိုင်ခံကုပေးနေတာ…
ဒီလိုနဲ့တနေ့…ကိုပေါ်(မင်းကိုနိုင်)၊ရယ်ကိုကိုကြီးရယ်၊ကိုသန်းတင်ရယ်ရောက်လာတယ်…..(အရင်ရက်က ကိုဌေးကြွယ်နဲ့ကိုမင်းဇေယျာရောက်လာပြီး…ငွေတွေလာပေးသွားတယ်)…..ကျနော် တို့ရဲဘော်တွေဝေးသွားတာတော်တော်ကြာသွားပြီလေ…..ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောဖြစ်ကြတယ်……ထောင်ထဲကအကြောင်းတွေ….စုံလို့ပေါ့….ကိုပေါ်နဲ့ကျနော်နဲ့ကအခုမှဆုံဖြစ်တာ….သူကကျနော့်ကိုဆေးရုံကဆင်းရင်…ကျန်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့ပြောတယ်…..ကျနော်တို့လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်တဲ့…..ကိုကိုကြီးကတော့ရီစရာတွေပြော ရင်း ဖြေသိမ့်လို့…..ကျနော်က ကုတင်ပေါ်က မထနိုင်ဘူး…ကိုပေါ်က ကုတင်ဘေးနားမှာ………..
ကျနော်တို့အားလုံးအရာရာဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကို..သူက…အားမာန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဘို့ပြော တယ်…..အမှန်ပြောရရင်အဲဒီအချိန်မှာ…စိတ်အားငယ်နေမိတာအမှန်ပဲ….ပထမတကြိမ်…အဲဒီရောဂါဖြစ်တာ…အောက်ပိုင်းသေမလိုဖြစ်သွားတယ်…..အားလုံးကမစိုးရိမ်ဘို့အကြောင်းဝိုင်းအားပေးကြတယ်……အဲဒီအချိန်မှာ…..ကိုပေါ်ကတခုခုကိုတွေတွေကြီးစဉ်းစားရင်းက…“ကျနော်တို့ပေးရတဲ့အရင်းနှီးတွေကများတယ်ဗျာ……ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်ပြောချလိုက်တဲ့စကားကြောင့် အားလုံးက သူ့ဆီကို အာရုံရောက်သွားကြတယ်.။
“….ဘယ်တတ်နိုင်မလည်းလေ…ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲ……ကျနော်တို့ အားလုံးမှာလူငယ်ဘ၀မကြုံဘူးကြဘူးနော်..သူပြောလိုက်တဲ့စကားကကျနော်ရင်ကိုတုန်ခါသွားတယ်……ကျနော်တို့အားလုံးမှာလူငယ်ဘ၀မရှိဘူးတဲ့……သိပ်မှန်တာပေါ့ဗျာ…..ကျနော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘ၀တွေဟာ…အုတ်ရိုးအတွင်းမှာကုန်ဆုံးသွားကြတာကိုး……လူငယ်ဘ၀အရသာကိုကျနော်တို့မခံစားဘူးဘူး………လူငယ်တွေရဲ့ပျော်ရွင်ခံစားကြတဲ့စိတ်ခံစားမှု့တွေကို…..ကျနော်တို့သိပ်မသိဘူး……..ကျနော့်ရင်တွေမွမ်းကြပ်သွားတယ်……..ဘ၀ဆိုတာဘာလည်း….မေးခွန်း တွေက ခေါင်းထဲမှာ အစီအရီ……..ပြီးတော့…သူက ဆက်ပြောတယ်….
………………..သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေက…ခုထိကျနော့်ရင်ထဲမှာကပ်တွယ်ငြိနေဆဲ……..နောက်ဆုံးကျနော့် ရောဂါသက်သာလာတော့….ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ…တိုင်းပြည်ကခွာတော့မယ်…..( လိပ်ပြာက မသန့်ဘူး ) ကိုပေါ်ပြောခဲ့တဲ့စကားက…ကျနော့်အတွေးကိုလာရိုက်ခပ်ပြန်တယ်…..နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ…ပေးဆပ်ဘို့သက်သက်ပဲ…ရယူဘို့မဟုတ်ဘူးတဲ့…သေချာတာတခုကတော့….ကျနော်ခင်ဗျားတို့လောက်မပေးဆပ်ရဲတော့တာ..အမှန်ပါပဲဗျာ……
နောက်ဆုံးရောဂါတော်တော်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီးလမ်းလည်းကောင်းကောင်းလျှောက်လို့ရသွားတော့… ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရပြီ….အဲဒီနေ့မှာ….သူတို့တော်တော်များများရောက်လာကြတယ်……ကိုပေါ်..ကိုကိုကြီး…ကိုမင်းဇေယျာ ၊ ကိုဌေးကြွယ် အဲဒီနေ့ကတော်တော်စုံတယ်….ကျနော်တို့အားလုံး…ဘားလမ်း မွတ်စလင်ဆေးရုံအောက်ခြေက…လမ်းဘေးလဘက်ရည်ဆိုင်က…ခုံပုစားပွဲလေးမှာ..၀ိုင်းထိုင်ရင်း…စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်…….ပတ်ပတ်လည်မှာလည်း…ထောက်လှမ်းရေးတွေကအပြည့်……..ကျနော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး…မှိုင်နေ တယ်….ကိုမင်းဇေယျာက ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်…….
“ ကောင်းပါတယ်….ကျနော် တခုခုအတွက် စဉ်းစားနေတာပါ….”
အမှန်တကယ်က….ကျနော်ညနေ၅နာရီမှာ….အမိမြေကစွန့်ခွာတော့မယ်….သူတို့ကိုအသိမပေးခဲ့ဘူး…ဘာလို့လည်းဆိုတော့…တခုခုဖြစ်လာရင်…သွားငြိနေမှာဆိုးလို့…..လက်မှတ်ပါဖြတ်ပြီးသွားပြီ……အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်…..ကျနော်သူတို့ရဲ့ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်းသလိုခံစားလိုက်ရတယ်…..
“ ကျနော်တို့တတွေ…ဒီလိုဘယ်တော့များမှ….ပြန်ဆုံနိုင်မှာပါလိမ့်….”…..ကျနော်တို့ တတွေဟာပျော်စရာကောင်းလှတဲ့…လူငယ်ဘ၀တွေကိုအစတေးခံရင်း…ပျော်စရာမကောင်းတဲ့..နိုင်ငံရေးလောကကြီးကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတယ်။ လုံခြုံအေးချမ်းပျော်ရွင်စရာဘ၀တွေဘယ်တော့ ရနိုင်မလည်းဟင်။
ဒါပေမဲ့…အခုနေ အခုချိန်အခါမတော့…..လိပ်ပြာ သိပ်မလုံလှဘူးဗျ……….ကျနော်က ကမ္ဘာ့ဟိုက်ပါပါဝါ…အမေရိကန်မြေပေါ်မှာ…အန္တယာယ်ကင်းကင်းနဲ့….မွေ့ရာပေါ်မှာအိပ်နေတဲ့အချိန်….ခင်ဗျားတို့တတွေက…အေးစက်လှတဲ့….သံမံတလင်း..အခင်းပေါ်မှာ..အကာကွယ်မဲ့..သံတိုင်ကြားက…လေထုကိုကာကွယ်ရင်း…..အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ကို ပုံဖော်နေမယ်ဆိုတာ…ပြောနိုင်ပါတယ်လေ….။
ကိုပေါ်…ရေ…ခင်ဗျားအပါဝင်….နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ…ဒေါ်စုခြံဝန်းထဲက…ကုလားထိုင်တွေပေါ်မှာထိုင်ရင်း…..ရုပ်ရှင်ဂီတ က..အနုပညာရှင်တွေနဲ့…ပြုံပျော်..ကြည်နူးနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေလို….facebook အပါဝင် မီဒီယာလောကကြီးတခုလုံးကို သမိုင်းတွင်စေမဲ့….ဓါတ်ပုံတွေ…ဗွီဒီယိုတွေကြည့်ချင်လိုက်တာဗျာ…..